Ciidamada Nidaamka Bishaar Al-Asad oo Si Buuxda Ula Wareegay Magaalada istiraatiijiga Ah Ee Homs.
Kumanaan katirsan ciidamada nidaamka Bishaar Al-asad iyo boqolaal Askari oo ruush ah ayaa gudaha ugalay xaafado katirsan magaalada Ximis oo ay horay umaamulayaan xoogaga suniyiinta kacdoonka wadankaasi.
Nidaamka Suuriya wuxuu ku dhawaaqay in ciidamadoodu ay si buuxda oo dhameystiran ula wareegeen gacan ku heynta magaalada Ximis oo ah magaalada sedaxaad ee wadanka ugu weyn wadankaasi kadib markii shalay ay isaga baxeen dufcadihii ugu dambeeyay ee xoogaga mucaaradka iyo qoysaskooda.
Wariyaal ayaa soo sheegay in si dhameystiran ay gacanta Maamulka Bishaar iyo maleeshiyaadka shiicada ugu dhacday Ximis tan iyo wixii ka dambeeyay sanaddii 2011 xilligaas oo kacdoono dagaal isku bedelay ay wadanka suuriya ka bilaawdeen.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in boqolaal katirsan ciidamadeeda Booliska ay ku faafisay xaafadda Alwacar oo aheyd meeshii ugu dambeysay oo xoogaga mucaaradka ay uga sugnaayeen magaalada Ximis oo dhacda bartamaha wadanka Suuriya.
Ragga Firfircoon ee soo tabiya kacdoonka suuriya ka socda waxay sheegeen in gaadiid basas ah ay shalay gelinkii hore ka daad gureeyeen 6000 oo qof kuwaas oo isugu jiray dagaalyahanno iyo dad shacab sacbooley ah.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in 20,000 oo qof laga barakiciyay xaafadda alwacar taas oo ka dhigan in 75% dadkii deganaa xaafaddaas ay isaga baxeen guryahooda halka kumanaan kale ay ku hareen guryahooda kadib markii maamulka al-asad uu uballan qaaday in aan la dhibaatayn doonin.
Heshiisyo is xigxigay oo bilihii lasoo dhaafay dhaxmarayay dowladda nuseyriga ah iyo mucaaradka dhax dhaxaadka ah ayaa dhigayay in magaalada ximis ay wareejiyaan taasi bedelkeedna si nabad gelya ah ay uga baxaan muslimiinta sunniga ah.
Wasaaradda Difaaca dowladda Ruushka waxay sheegtay in muddo 6 bilood ah ay ciidamadoodu sii haysan doonaan xaafadda Alwacar kadibna ay ku wareejin doonaan ciidamada booliska Nidaamka Suuriya.
Dhammaan dadkii laga raray Ximis ayaa loo daabulay dhanka gobolka Idlib ee waqooyiga Suuriya halkaas oo diyaaradaha dagaalka Ruushka ay ku duqeeyaan dadka shacabka ah.
Sanaddii lasoo dhaafay ee 2016 ayay ciidamada Nidaamka iyo kuwa Ruushka waxay dagaal kula wareegeen magaalada Xalab oo ah caasimadda 2-aad wadanka ugu weyn kadib xasuuq daran oo ay ugeysteen shacabka musliminta sunniga ah.
Dr.Aymen Al-zawaahiri hoggaamiyaha alqaacidda ayaa jamaacaadka islaamiga Suuriya kula taliyay in dagaalka ay u bedeleen mid ku dhufo oo ka dhaqaaq ah islamarkaana aysan adeegsan siyaasadda difaacashada magaalo si cadawga loo dhiig bixiyo ugu dambeyno loogu qasbo in uu isaga cararo magaalooyinka waaweyn.